बियर पिउन बुबासँग पैसा मागेका निश्चलले गरे फेसबुकमा लाइभ आत्महत्या (भिडियोसहित) « Janata Samachar
बियर पिउन बुबासँग पैसा मागेका निश्चलले गरे फेसबुकमा लाइभ आत्महत्या (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 8 October, 2018 5:33 pm
काठमाडौं । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ७ का २५ वर्षीय निश्चल तामाङले फेसबुकमा लाइभ गर्दै आत्महत्या गरे ।
२०७५ साल असोज १४ गते आइतबार राति १२ बजे । निश्चल फेसबुकमा आए । काङ्ग गुरुङ नामको फेसबुकबाट राति साढे नौ बजे फेसबुकमा अंग्रे्रेजीमा लेखेका थिए, ‘धेरै गम्भीर कुरा हुँदैछ, म राति १२ बजे लाइभ आउँदैछु, कृपया मेरो लाइभ रेकर्ड गर्नुस् ।’
राति १० बजेर १३ मिनेटमा उनले स्पष्ट रुपमै लेखेः तपाईंहरुमध्ये कति जना लाइभ आत्महत्या हेर्न चाहनुहुन्छ ? यसमा भने उनका फेसबुक साथीहरुले आफ्नै पाराले सम्झाउन खोजेको कमेन्टहरु गरेका थिए । कसैले जोकको रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए भने कसैले के गर्न लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
आत्महत्याको संकेत गर्ने स्ट्याटस लेखेलगत्तै उनले थप तीन वटा स्ट्याटस लेखे । समय थियोः राति १२ बजे । प्रतीक्षा गर्नुस् । अझ उनले यतिसम्म भन्न भ्याए की सबैले लाइभ रेकर्ड गर्न नबिर्सनुस् है । राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा उनी लाइभमा आउँछन् । ह्विस्की खाँदै लाइभमा बोलिरहन्छन् । लाइभ भिडियो काटिन्छ । उनी लाइभमा अङ्ग्रेजीमा केही भन्दै छन् ।
मध्यरात १२ बजेर १३ मिनेटमा उनी फेरी लाइभमा आउँछन् । मेरी आमाको यो स्कार्फले झुण्डिएर मर्छु भन्दै देखाउँछन् । डेढ मिनेटजति पछि फेरि लाइभ काटिन्छ । धेरैले उनलाई सम्झाउँछन् त्यसो नगर के हो समस्या भनेर भन हामी छौँ भन्छन् तर उनी कसैको कुरा सुन्दैनन् । लाइभ हेरेर कमेन्टमा उनको जवाफ फर्काउँछन्– ‘मेरो समस्या तपाईंहरुले सोचेजस्तो छैन, मर्नु नै मेरो समाधान हो । मेरो ममी सुतिसक्नु भएकाले यो निर्णय गर्दैछु ।’
भिडियो लाइभ भइरहँदा कोही आएको जस्तो देखिन्छ । निश्चलको जवाफ हुन्छ, तपाईं आरामले सुत्नु । दुई घण्टापछि तपाईँलाई कहिले पनि डिस्टर्ब हुने छैन । राति १२ बजेर २२ मिनेटमा उनी लाइभमा आउँछन् र झण्डै १७ मिनेट कुरा गर्छन् । लाइभ काटिन्छ, त्यसलगत्तै फेरि लाइभमा आउँछन् । लाइभमा देखाएरै उनी टेबलमा चढ्छन् र स्कार्फको पासो आफ्नो घाँटीमा लगाउँछन् । अनि, झुण्डिन्छन् । लगत्तै लाइभ भिडियो काटिन्छ ।
झुण्डिँदा झुण्डिँदै भिडियो काटिएकाले कसैले ठट्टा पो गरेको हो कि भनेर शंका गरे । कसैले लाइभ भइरहँदा कति खेर गर्ने हो, सुत्न ढिला भइसक्यो भनेरसमेत जिस्क्याएका थिए । तर, भोलि बिहान चितवनमा एकजना युवक फेसबुक लाइभमै झुन्डिएर आत्महत्या गरे भन्ने समाचार भाइरलजस्तै बन्योे । अघिल्लो दिन राति लाइभमा हेर्ने धेरै जसोमान्छेले उनीलाइ चिनेकासम्म पनि थिएनन् । तर केही समय पछि थाहाँ भयो अघिल्लो बेलुका फेसबुकमा लाइभ गरेर आत्महत्या गर्ने निश्चल तामाङ थिए । अहिले फेसबुकले झुण्डिएको भिडियो उनको प्रोफाइलबाट हटाइसकेको छ ।
निश्चलको परिवारले छोराले आत्महत्या गर्छन् भन्ने कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । भदौ २३ गते निश्चल तामाङको परिवारले भव्यरुपमा उनको जन्मदिन मनाएका थिए । सरल स्वाभावका निश्चल अरुलाई छिटै विश्वास गर्ने विशेषताका थिए । अरुले भनेको कुरालाई गम्भीररुपमा लिने उनको बानी थियो । गाउँघरमा उनको धेरै साथी छन् । साथीबीच पनि उनी प्रिय थिए ।
ट्याटु आर्टिष्ट र कुकसमेत थिए । म्यूजिक सिक्ने उनको रहर थियो । सानैदेखि म्युजिकमा शोख थियो । गिटार बजाउन माहिर थिए, गीत गाउँदै रमाइलो गर्ने उनको बानीले उनको अघिपछि थुप्रै साथीहरु हिँड्थे । काठमाडौंमा जन्मिएका निश्चल तीनवर्ष अघि बुबा जीवन लामा र आमा कमलासँग चितवन आएका हुन् ।
चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा सानो जस्ताले छाएको उनीहरुको घर छ । घरमा हजुरबुबा, हजुर आमा, बुबा आमा र निश्चलकी श्रीमती बिसुजा छिन् । निश्चल एक्लो छोरा । २५ वर्ष पूरा भएर भदौ २३ गतेदेखि २६ वर्षमा पाइला चालेका थिए । १२ कक्षासम्म पढेका निश्चल लागू औषध प्रयोग गर्थे । १० कक्षा पढ्दाखेरी साथीभाइको लहलहैमा लागूऔषध प्रयोग गर्न थालेका थिए । निश्चललाई सुधार गर्न उनको सानीमाले काठमाडौंमै दुईपटकसम्म सुधार गृहमा राखेका थिए । पछि सुधारगृहबाट निश्चल भागेर चितवन आए । निश्चलले दुईवर्ष अघि मात्रै झापाकी बसुजासँग मागी विवाह गरेका थिए ।
त्यो दिन निश्चलले बुबासँग बियर पिउन मन लागेको बताएका थिए । बियर किन्न बुबासँग तीनसय रुपैयाँ मागे । बुबाले आफूसँग खुद्रा पैसा नभएकाले फुपुको पसलवाट बियर ल्याउन पठाए । निश्चल फुपुको पसल पुग्दा पसल बन्द भइसकेको रहेछ । निश्चल त्यतिकै फर्किए र भोलि मात्रै बियर पिउनुपर्ला भन्दै कोठामा छिरे । रातको झण्डै ११ बज्न लागेको थियो । बुबाले पनि आफ्नो मोबाइल चलाउन थाले, छोरा कोठामा छिरेर अंग्रेजीमा बोल्न थाले । निश्चलको तामिल साथीहरु थिए । काठमाडौँ पढ्दाताका बनाएका तामिल साथीहरु एकदुईपटक चितवनको घरमै समेत पुगेकाले साथीसँग अंग्रेजीमा बोलेको बुृबा आमालाई भान भयो ।
निश्चल बोल्दाबोल्दै बुबाआमा निदाएछन् । पछि बुबाको मोबाइलमा तारन्तार फोन आउन थाल्यो । बुबाले फोन उठाए । निश्चलका साथीहरुले फोन गरेका रहेछन् । त्यस अघि पनि थुप्रै फोन आएको रहेछ । उनकै साथीहरुले फेसबुकमा निश्चलले आत्महत्या गर्न थालेको भिडियो हालेकोले कोठामा गएर हेर्न भने । निश्चलले भित्रबाट ढोकाको चुकुल लगाएका थिए । बाहिर सटर थियो । एउटा सटर खुलेन । अर्को सटर भने सजिलै खुल्यो । बुबाले सटर खोलेर हेर्दा आमाको सल घाँटीमा लगाएर झुण्डिरहेको अवस्थामा देखे । हतारमा सल काटेर भूइँमा झारे । त्यतिबेलासम्म उनको शरीर चिसो भइसकेको थियो ।
सांसद घर्तीको निधन
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको निधन भएको छ । उहाँलाई उपचारका लागि
‘ओली र प्रचण्डले धोका दिए’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार जनचाहना अनुसार नचलेको बताउनु भएको छ
सरकारद्वारा किसानको ऋण मिनाहा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले साना किसानको ऋण मिनाहा गरेको बताउनुभएको
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गः जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्न सकिन्न
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको
‘बिपीले भनेर गाई पाल्दा १४ लाख…
नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले जहिले पनि बिपीबिपी मात्र भन्नुहुन्छ । तर बिपीले के भन्नु भएको थियो ? धेरै नेतालाई थाहै छैन्…
रविन्द्र काम छाडेरै घुम्ने, गोकर्ण विष्ट…
काठमाडौं । आर्थिक वर्षका लागि १ करोड १३ लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्च विनियोजन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले चार महिनामै ७२ लाख…
२०७५ मंसिर २७ गतेको राशिफल
मेष राशिः गरेका काम असफल होलान् । शोक तथा चिन्ता पर्ला । वृष राशिः परिवारमा विवाद पर्ला । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले…
फोरम नेताको योजनामा भारतीय बालक अपहरण
लक्ष्मी काफ्ले झापा । राजनीतिक दलका नेताकै योजनामा भारतीय बालकको अपहरण भएको खुलेको छ । भारत बिहार सुपौलका मोहम्मद सद्दामका…
उपेन्द्र यादव समूहले बुझायो १३ थान…
विद्यानन्द राम राजविराज । तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी ) अविनाश समूहका संयोजकलगायत केन्द्रीय सदस्यले बुधबार सरकारसमक्ष…
नर्सको पीडाः ‘श्रीमानले सधैँ साथीसँग सम्बन्ध राख्न दबाब दियो’
प्रेमिका भेट्न जम्मुकश्मिरका युवा काठमाडौंमा, यसरी बसेको थियो माया
बौद्धबाट यौनधन्दा चलाउने १४ महिलासहित १८ जना प्रहरी फन्दामा
‘किशोरीलाई मदिरा खुवाएर, 'बलात्कार’
‘क्याप्टेन’को पहिलो गीतमा अनमोल र उपसनाको रोमान्स
कुन राशीले कहाँ धन राख्दा उत्तम ?
‘बिपीले भनेर गाई पाल्दा १४ लाख ऋण लाग्याे’